Imibuzo ye-8 ukuzibuza ngaphambi kokuba uthathe i-Cetilistat powder | AASraw
/Blog/cetilistat/Imibuzo ye-8 ukuzibuza ngaphambi kokuba uthathe i-Cetilistat powder
ezaposwa ngomhla 09 / 14 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo cetilistat.
1. Igama lomkhiqizo: Cetilistat
2. Iipropati zeMichiza zeMveliso
3. Inkcazo elula yeCettilist powder
4. Indlela yokusebenza yeCetilistat powder
5. Ukusetyenziswa kweCetilistat
6. I-Cetilistat powder Isisombululo
7. Iimpembelelo zeCapetilist Side Effects
8. Izicwangciso zeCelitilistat
Izikhokelo ze-8.1 zokuLondoloza
8.2 Yintoni ongayenza Ngetyala Ulahlekelwa nguDose
I-8.3 Yintoni eyenzekayo xa Ugqithisa kwi-Cetilistat powder
I-8.4 Ukusetyenziswa kwe-Cetilistat kubantwana
1. Igama lemveliso: Cetilistat
Igama le-IUPAC: 2-hexadecoxy-6-methyl-3,1-benzoxazin-4-enye
Igama lomhlaba Ixabiso lePropati
I-Unit Counter-Bonded Unit Count 1
Ukubala okungabonakali kweBond Stereocenter Count 0
Ukubalwa kweBond Stereocenter Count 0
Ukubala okungenakuchazwa kwe-Atom 0
Count Count Stereocenter Count 0
Count Atom Count 29
Ukuhlawula ngokusemthethweni 0
Inkomfa iCanonicalized Liyinyaniso
IMisa eyiyo 401.293 g / mol
Indawo ye-Topological Polar Area 47.9 A ^ 2
Isibalo seBond yokuguquguquka 16
I-Hydrogen Bond Acceptor Count 4
I-Hydrogen Bond uMniki-mali 0
Isisindo somzimba 401.591 Mol
3. Inkcazo elula Cetilistat powder
I-Cetilistat yinyango yomlomo eyenzelwe ukunceda abantu baninzi banciphise ubunzima. Ikwahlula phantsi kwe-benzozaxines, eziyi-organic compounds eziqukethe i-benzene ezidibeneyo kwi-oxizine ring. I-oxizine ring isisiseko se-aliphatic ring 6 kunye ne-atom nitrogen ye-1, i-1 i-oksijeni ye-oksi kunye ne-atom carbon i-4.
Izifundo ezibandakanya izilingo zabantu ziye zaqinisekisa ukuba letilistat isebenza ngendlela efanayo ne-Orlistat (Xenical). Oku ukuhla ukusinda isicatshulwa esisisiseko sinciphisa i-pancreatic lipase, yinto enzyme eyenza i-triglycerides emathunjini. Ukungabikho kwe-enzyme kuthintela i-hydrolization ye-triglycerides ibe yi-fatty acid acids. Oku kuvumela ukuba i-triglycerides ikhutshwe ngaphandle.
Nje ngo-Orlistat, i-Cetilistat yi-lipase inhibitor, oku kuthetha ukuba isebenza kwindlela yokuxhamla isisu sokunciphisa i-lipases, eziyi-enzymes ezijongene nokuphuka kwamafutha okutya. Ukukwazi kwawo ukuphazamisa ukuphazamiseka nokuxutywa kwamafutha okutya okuvela emathunjini, isicatshulwa sinceda ukunciphisa iikhalori kunye nokudla okunamafutha, ngoko ke kukunceda ukulahleka kwesisindo.
Uchungechunge lweeNzululwazi zeSigaba II lubonise ukusebenza kweCetilistat nokukhuseleko. Kwilinye ilingo elithatha iiveki ze-12 kwaye zibandakanya izigulane ze-612 ezinezifo zesifo sikashukela, abaphandi bafumene ukuba izigulane ezasebenzisa i-80 milligrams kunye ne-120 milligram ye-Cetilistat powder yayinokulahleka okukhulu, ukulawula ukulahlekelwa yi-3.85 kilogram kunye ne-4.32 kilogram ngokulandelanayo. Oku kuqhathaniswa neekhilogram ze-2.86 ezilahlekelwe yizo zi gulane ezithatha indawo.
I-Cetilistat ayifinyelelanga kuphela iidridi ezichithwayo zokulahleka komzimba njenge-Orlistat, kodwa zombini izidakamizwa zokulahlekelwa kwesisindo ziye zabonisa ukuba zivelise ukunciphisa inani le-HbA1c.
Ekuqaleni kwesifundo esithile, izigulane zinezikhokelo zomzimba phakathi kwe-28 kunye ne-45 kwaye zanikwa i-metformin yokulawula isifo sikashukela. Nangona izigulane ezithatha i-cetilistat zalahlekelwa bunzima obunjengalezo ezithatha i-Orlistat, iqela letilistat libekezelela le nkunkuma ngakumbi. Ekupheleni kwetyala, kwaqulunqwa ukuba iziphumo zokubekezeleka kunye nokukhuselwa kwe-cetilistat zahlala zihambelana nezo zifunyenwe kwiilingo zangaphambili.
Ixabiso lokuyeka ngokukhawuleza ngenxa yeziganeko ezimbi ziyi-2.5 ipesenti, ipesenti ze-5.0 kunye neepesenti ze-2.5 ze-cetilistat i-120 milligrams, i-80 milligram kunye ne-40 milligrams ngokulandelanayo. Oku kuqhathaniswa neepesenti ze-11.6 ze-Orlistat ne-6.4 ipesenti ye-placebo. Isizathu esona sizathu sokusetyenziswa kweeklinikhi ze-Orlistat zexesha elifutshane liyingozi yezilwanyana zesisu.
Kwiimeko ezininzi, oogqirha babala i-cetilistat dosages ukusuka kwi-60 milligrams ukuya kwi-100 milligrams. Ufanele uthathe i-cetilistat ngokuchanekileyo njengoko ugqirha wakho ugqirha, kwaye akufanele udlule umyinge ngaphandle kokuba ucetyiswa.
Ukuba uthatha i-levothyroxine okanye i-cyclosporine, qi niseka ukuthatha la mayeza 4-5 iiyure ngaphambi okanye emva kokuthatha letilistat.
Njengokuba kuninzi (ukuba akunjalo) ukuhla ukusinda iziyobisi, i-cetilistat ineziphumo ezithile. Iziphumo eziqhelekileyo ze-cetilistat zibandakanya (kodwa azikhawulelwanga):
Isisu somzimba okanye intlungu
Ukuba unayo nayiphi na imiphumo emva kokusebenzisa i-cetilistat, kubalulekile ukufuna unyango ngaphandle kokulibaziseka.
Gcina amacwecwe e-cetilistat kwindawo yokushisa.
Ukuwagcina kude nokukhanya ngqo okanye ukushisa.
Musa ukuqhwala amacwecwe amacwecwe.
Gcina kude nezilwanyana kunye nabantwana.
Musa ukuthululela amacwecwe e-cetilistat kwi-drainage okanye ungawachukumisi phantsi kwindlu yangasese.
Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga nokukhupha iipilisi ze-cetilistat ngokukhuselekileyo, qiniseka ukuba uqhagamshelane nekhemistiki okanye ugqirha wakho.
Ulahlekelwe umthamo? Thatha ngokukhawuleza xa ukhumbula. Ukuba kuphantse ixesha lakho elilandelayo, libale idosi yakho ephosakeleyo uze uthathe enye ehleliweyo. Ungalokothi uthathe i dose eyongezelelweyo ukwenzela umntu olahlekileyo. Emva komthamo olandelayo, qalisa kwakhona ishedyuli yakho yamanani njengesiqhelo.
Mhlawumbi uyazibuza - kwenzekani xa ndilahlekelwa umthamo? Ewe, ukulahlekelwa umthamo kuya kunciphisa ukuphumelela kwonyango kwaye kuthintela izinga lokuphumelela kwesisindo somzimba. Ukungaphumeleli umthamo ngexesha lonyango luya kunciphisa ukusebenza kwonyango. Ezinye izigulane zize zibonise iimpawu zokukhishwa kwangaphambili xa ziphosa ngokuphindaphindiweyo amanani.
Ezi zilandelayo zicebise iingcebiso ezinokukunqanda ukuba ulahlekelwe i doseistat dose yakho:
Hlela ishedyuli, oko kukuthi uthathe isigqibo malunga nexesha elichanekileyo ngemini xa uya kuthatha umthamo wakho. Qinisekisa ukuba ulungelelaniso lwenkqubo yakho yokulinganisa ukuze ube lula.
Ukuba unobungozi ukukhumbula ukuthatha umthamo wakho, setha i-alamu okanye isikhumbuzi kwifowuni okanye ubukele.
Cela amalungu omndeni wakho akukhumbuze.
I-8.3 Yintoni eyenzekayo xa Ugqithisa Cetilistat powder
Ukuba awuzukufikelela kwiziphumo ezifunayo ngokukhawuleza njengoko ukulindele, ungacingi ukuba uthathe izidakamizwa ngobuninzi obukhulu ukwenzela ukukhawulezisa inkqubo. Oku kungenxa yokuba, nangona uthatha i-cetilistat ngobuninzi okanye ngexesha elifutshane kunokuba lichazwe, awuyi kulahleka ubunzima obungaphezulu, okanye ungaphinde ulahlekelwe isisindo ngokukhawuleza. Kunoko, unokudlula phezu kweziyobisi kwaye uphele ngezinye iingxaki ezingakhokelela ekufeni.
Xa uthe wagqithisa i-cetilistat, khangela uncedo lwezonyango kwigumbi eliphuthumayo elikufutshane okanye kwiziko lempilo. Kunyanzelekile ukuba ulethe ilebula, isitya, okanye ibhokisi kunye nawe ukuze oogqirha bakwazi ukufumana ulwazi oluyimfuneko malunga neziyobisi.
Ngaphambi kokusebenzisa iCetilistat, kucetyiswa ukuba uqhagamshelane nekhemistiki okanye ugqirha wakho malunga neziyobisi kunye nendlela okhuselekileyo ukuyithatha. Njengamanye amaninzi amaninzi, iCetilistat ayifanele ukwabelwana. Oku kuthetha ukuba akufanele unikeze iiplatelet ezifunekayo ze-cetilistat kumnye umntu, nokuba ngaba unengxaki efanayo nawe. Oku kungenxa yokuba i-dossi efunekayo inokukhuseleka kuwe, kodwa ingaba yinto engaphezu kwesinye.
Ukusetyenziswa kwe-8.4 ye-Cetilistat abantwana
I-Cetilistat ayifanele ithathelwe ngabantwana njengoko inokuthi ithinte ukukhula kwayo. Ngoko ke, kucebise ukulibazisa unyango kude kube yiminyaka eyi-18 okanye ukude ukukhula kuphelile.
Abantwana, ingakumbi ngexesha lokukhulelwa, abakhuthazwa ukuba basebenzise la machiza njengoko kunokuba nemiphumo emihle kwimigangatho yabo yokuphakama nokukhula. Unyango, ukuba ungavelisi iziphumo, unokulibaziseka kude kufike ukukhula. [
Izifundo zibonise i-Cetilistat powder ukuba ibe namandla ekuveliseni i-statistically nekliniki enkulu ukuhla ukusinda abantu abagqithiseleyo kunye nabanamafutha. Ngaphandle kokukwazi ukunciphisa ubunzima, izigulane ezinezinye izifo ezinxulumene nokukhuluphala zibuye zenzeke ngcono.
Yamada Y, Kato T, Ogino H, Ashina S, Kato K: I-Cetilistat powder (ATL-962), i-pancreatic lipase inhibitor yenombolo, iphakamisa inzuzo yesisindo somzimba kwaye iphucula iipiliti zeepilisi kwiiliti. IHorm Metab Res. 2008 Aug; 40 (8): 539-43. i-doi: 10.1055 / s-2008-1076699. I-Epub 2008 Meyi 21.
I-Kopelman, i-Bryson, i-Hickling, i-Rissanen, i-Rossner, i-S Toubro kunye ne-Valensi International Journal ye-Obesity volume 31, iphepha 494-499 (2007
I-7 Best Nootropics (SmartDrugs) kwimarike -Phenylpiracet I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike yaseBromantane